Mara mma B Cup Nnukwu ịnyịnya ibu Japanese Girl Akira TPE Mmekọahụ Doll
Nwa bebi nwoke nke Japan,Ewepụghị obi nwa bebi mmekọahụ,B iko ụmụ bebi mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi,Anime mmekọahụ nwa bebi
Akira enwetala obi ọtụtụ mmadụ maka adịghị mma ya dị ọcha. A sị ka e kwuwe, nke a abụghị ihe aka ya dị ọcha. O nwere ihe ịtụnanya. Ọ bụrụ n’ịwere onwe gị dị ka oke okwukwa, naanị ajụjụ ị ga-ajụ bụ ihe kpatara ị jiri chere ogologo oge ka gị na ya nọrọ. Ọ dị ka onye mara mma na onye aka ya dị ọcha, mana ọ nwere ahụmịhe.
Akira bụ nwa agbọghọ mara mma nke nwere ọdịdị pụrụ iche. Omume ya dị nro, nwee obiọma ma dịkwa jụụ. O nwere obi na-ekpo ọkụ ma dị obiọma ma dị nwayọọ, dị ka ụmụaka. Ọ na-echegbu onwe ya banyere echiche nke ụmụnne nwanyị na mgbasa ozi na ndị ọzọ, mana oge ụfọdụ ọ na-esiri ike ikwu ihe ị chọrọ. Ihe na-adịghị mma bụ na enwere mkpebi ụfọdụ n'ime mkpebi.
Ọ na-enwe mmasị n'ọtụtụ nri, yana chi jiri n'ehihie nwere ike nwanne ya agaghị funahụ ya. Nke mbu bu “tomati”, karisia “mkpuru tomato”, akwukwo nri ohuru na ihe ndi ozo. Mana m na-achọ iri noodles ndị a na-eri na Italian (nri a na-ejikarị ọtụtụ tomato ma ọ bụ ihendori tomato), mana m kpọrọ asị asị tomato mana ọ na-atọ ụtọ itinye tomato.
Ọ bụ nwa bebi nwere ezi uche nke nwere isi na ahụ anaghị ewepụ ya. Ka ị na-eche na ọ bụ onye dị ndụ.
Ibu ibu ： 63 lbs (29kg)
N'úkwù ： 20.9 sentimita (53cm)
N'úkwù ： 30 sentimita (76cm)
Onyinye ： 6.7 sentimita (17cm)
Ntụ ： 5.1 sentimita (13cm)
Ọnụ: 3.9 sentimita (10cm)
Ichikota 59.9*15.8*11.1 inches(152*40*28cm)